Aqoonyahan M Xuseen: “Farmaajo Miyuusan Madaxweyne u ahayn Puntland? Ha ka Dhabeeyo Ballanqaadkiisii Abaalmarinta” (dhegayso) – Radio Daljir
Juunyo 1, 2017 2:26 g 0
Aqooyahan Maxamed Xuseen Cali oo horey u soo noqday Maareeyaha Guud ee Dekadda Xamar ayaa waraysi Gaar ah oo uu siiyey Radio Daljir wuxuu Hhmbalyo iyo bogaadin u diray ciidamada Puntland ee ku guuletay in ay gacanta ku dhigaan qaraxyo la doonayay in lagu halaago dad aan waxba galabsan iyada oo lagu guda jiro bisha Barakaysan ee Ramadaan.
Aqooyahanka ayaa Madaxweynaha Farmaajo ugu baaqay in uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisii ahaa in abaalmarin la siin doono qofki ku guuleysta qabashada qaraxyada aragagixisadu soo maleegto. Wuxuu kale oo dawladda Puntland ka codasaday in ciidamadaas la siiyo abaalmarin iyo dalacsiin si ay kuwa kale ugu daydaan, una laba jibbaaraan adeegga ay ummadooda u hayaan.
Waxaa Aqooyahanka waraystay wariye cXakiin Xusein Xasan, Daljir Garoowe.